Building Construction and Infrastructure: မြန်မာပြည် မြို့တော် ဈေးများ နဲ့ မီး ဘေးကာကွယ်ရေး။
"မီးလောင်မှုကြီးတွေ တော်တော်များများ မှာ မီးစလောင်တာ ကို အချိန်မီ သာသိခွင့် တားခွင့် ရခဲ့ရင် ရေတစ်ခွက်၊ သဲတစ်ဆုပ် နဲ့တင် ငြိမ်းသတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။"
မြို့ကြီးတွေ က မြို့မဈေးတွေ မီးလောင်တဲ့ သတင်း တွေ က နှစ်တိုင်းလိုလို ကြားရပါတယ်။ (အထူးသဖြင့် နွေရာသီ ရောက်ရင် ပေါ့။) ဒီအခါ ဆိုင်တွေမှာ ပုံအော ရင်းထားတဲ့ သူတွေ ရင်ကွဲနာ ကျရောပဲ။ လူပင်ပန်းခံ၊ စိတ်ပင်ပန်းခံ ပြီး နှစ်ရှည်လများ တစ်ဖြေးဖြေးချင်း စုဆောင်း လာရတာတွေ၊ ရင်းနှီးထားရတာ တွေ ချက်ချင်းကြီး ဆုံးရှုံးသွားရတယ်။ ကံဆိုး လို့ ကိုယ့်ဆိုင် က စတဲ့ မီးဆို ရင် အရင်း အပြင် နောက်က ရှိသမျှ ပါ အလိုက်ပေး လိုက်ရပါလိမ့်အုံးမယ်။ " တောမီးလောင် တောကြောင် လက်ခမောင်း ခတ် " ဆို တဲ့ စကားပုံ က လည်း ဈေးပြန်ဆောက်တဲ့ အခါ၊ ကိုယ့်ဆိုင်ခန်း နေရာလေး ပြန်ရဘို့ အတွက် ပူပင်စရာ တစ်ခု ကို တင်စားချက် အဖြစ် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။
ဒီ Post ကို စရေးခဲ့တာ ၆ လ ကျော် လောက် ရှိပါပြီ။ မနှစ်က မန္တလေး ဈေးချိုတော်ကြီး ကို ခန ရောက် ခဲ့ပြီး ဒါတွေ ကို သတိထားခဲ့ မိပါတယ်။
လူသွားလမ်းတွေ (အထည်ပုံတွေ၊ ဂျပ်ဘုံးတွေ နဲ့) ပိတ်ချင်တိုင်း ပိတ်နေတာ။
အရေးပေါ် အခြေအနေ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အလင်းရောင် မရှိတာ (မှောင်နေတာ)၊ အရေးပေါ် ထွက်ပေါက်ပြ Emergency Exit Signs & Exit Lighting တွေ မရှိတာ နဲ့ အရေးပေါ် ထွက်ပေါက် ရှာရခက်တာ။
ဆိုင်ခန်းတွေ မှာ မီးလောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ (အဝတ်၊ စက္ကူ၊ စာအုပ်တွေ) ပုံနေတာ (ဆိုင်ခန်းတွေ က အစ သစ်သားခင်း၊ သစ်သားကာ လောင်စာ တွေ ပါ။) မီးဒါဏ်ခံနိုင်တဲ့ အဆောက်အအုံ မျိုး အနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
အရေးပေါ် မီးသတ်စနစ် တွေ အဆင်သင့် ရှိမနေတာ
မီးသတ်စခန်း က ကပ်ရက် လမ်းတစ်ဘက် မှာ ရှိပေမဲ့ ဈေး ဘေးပတ်လည် လမ်းတွေ က လည်း မီးသတ်ကား မပြောနဲ့ ဆိုက်ကားတောင် ဖြောင့်အောင် သွားလို့ မရတာ။
ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း ရေးချင်စိတ် ပေါ်လာခဲ့ လို့ အစရေးခဲ့ ပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Publish မလုပ်နိုင် ခဲ့ပါဘူး။ ခု မင်္ဂလာဈေး နဲ့ မုံရွာဈေးတွေ မှာ ပါ မဆမတန် ဆုံးရှုံး မှု တွေ ထပ်ဖြစ်လာလို့ ပြန်စ မိတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Fire Protection Systems လို့ခေါ်တဲ့ မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ ထွန်းကားခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ Automatic Fire Sprinkler Systems လို အလိုအလျောက် မီးငြိမ်းသတ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ က မီးတွေ တော်တော်များများ ကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တော့ ဒီစနစ်တွေ ကို အဆောက်အအုံ အနည်းငယ် မှာပဲ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့် ဟိုတယ် တွေ မှာ ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အသစ်ဆောက်ထားတဲ့ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်သစ် မှာလည်းတွေ့မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Plaza တွေ နဲ့ ဈေးအကြီးစား တွေမှာ မတွေ့ရသေးဘူး လို့ထင်ပါတယ်။
ကိုလိုနီ လက်ထက် က ကျန်ခဲ့တဲ့ Fire Hydrant တွေ နဲ့ အချို့အဆောက်အအုံ ဟောင်းတွေ မှာ Fire Hosereels တွေ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ တီဗီ သတင်း တစ်ခု မှာ သဘာဝ ဘေးဒါဏ် တစ်ခု ထိ အပြီး ရန်ကုန် မှာ ရေတွေ ဝေပေးတဲ့ အခါ Fire Hydrant တွေ က နေ ရေဘုံဘိုင် လို ရေဝေနေရတာ တွေ့ရတော့ အတော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသေးတယ်။
စာရေးသူ စက်မှုတက္ကသိုလ် တက်တော့ Fire Hosereels တွေ ရှိနေခဲ့တယ် လို့ ခံစား မိခဲ့သလိုလို ပါပဲ။ ရှိသာရှိပေမဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတာ မဟုတ်လို့ ပျက်စီးနေကြတာ ဖြစ်ပြီး ရေလည်း ထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အလုပ်လုပ် တယ် ဆိုရင်တောင် မှ စာရေးသူ လို စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ယောက် တောင် ဘယ်အခြေအနေ မှာ ဘယ်လို သုံးရကောင်းမှန်း အဲဒီ့ အချိန် မှာ မသိခဲ့သေးတာ အမှန်ပါ။ We Need FIRE EDUCATION from NOW-ON !
လူအများစု စုဝေးရာ၊ ပစ္စည်းတွေ အများကြီးသိုလှောင်ထားရာ ဖြစ်တဲ့ ဈေးကြီးတွေမှာ မီးသတ်စနစ် တတ်သင့်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အခက်အခဲ တွေ ကတော့ ရှိနေဆဲပါ။ တစ်ချိန်ချိန် မှာ ဒီစာ က မြန်မာပြည် မှာ မီးဘေးကာကွယ်ရေး စနစ် တွေ ထွန်းကားလာ စေဘို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒီ blog post ကို စာရေးသူ အရင် တင်ပြပေးခဲ့ဘူးတဲ့ Introduction to Fire Protection Systems နဲ့ တွဲဖက် လေ့လာ စေလိုပါတယ်။ [ http://chawlwin.blogspot.com/2008/10/fire01introduction.html ]
ဒီ Post မှာ တင်ပြမှာတွေ ကတော့
မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စနစ် တွေ ဘာလို့ တတ်ဆင်သင့် သလဲ။
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အတွက် တာဝန် ကိုယ်စီ ရှိကြသည်။
အခြေခံ မီးဘေးကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ။
မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စနစ် တွေ က စတင် တပ်ဆင်ဘို့ က ဈေးချိုတယ် လို့တော့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ရေရှည်ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ လူတွေ နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို အကာကွယ်ပေးတဲ့ အပြင် စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေ မှု ကို ပါပေးမှာ မို့ အကျိုးရှိစေမှာ တော့ အမှန်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ အတွက်၊ လုံခြုံမှု ကိုရမယ်။ စိတ်ပူပန်မှု ကို လျော့ပါးစေမယ်။
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လည်း မီးကြောင့် ဖြစ်မဲ့ အသက် အန္တရာယ် ကို သိပ် ပူပန်စရာ မလိုဘူး။
မီးအာမခံ ထားတဲ့ အခါ ပရီမီယံ အဆပေါင်း များစွာ နည်းသွားမယ်။ ဆိုင်တိုင်းလိုလို အာမခံ ထားနိုင်လာမယ်။ တကယ်လို့ မတော်တဆ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ခဲ့အုံး မီး အာမခံ ကနေ အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ပြန်ရမယ်။ မီးအာမခံ ကုမ္ပဏီ တွေ အတွက်လည်း အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစနစ် တွေ က ပြီးပြီးရော လုပ်လို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ "မီးချိတ်၊ မီးကပ်၊ သဲပုံး၊ ရေအိတ်လေး တွေ လောက်နဲ့တင် လည်း မရပါဘူး။" ကလေးကစားစရာ သာသာ မီးသတ်ဗူးသေးသေး လေး ကို ချိတ်ပြထားယုံ နဲ့ လည်း မရပါဘူး။ စာရေးသူ အရင် က တင်ပြပေးခဲ့ သလို အစစ အရာရာ တစ်ခုချင်း အသေးစိတ် ဂရုစိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲ တွေ လည်း အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဈေးတွေ လို လူအများ စုဝေးရာ နေရာ တွေ ကို မီးဘေးကာကွယ် ရေး အတွက် တစ်ဦး၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ဖွဲ့ ထဲ မှာ တင် တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါဝင်ရမဲ့ သူတွေ ကတော့။
ဒီဇိုင်းလုပ်သူ ဗိသုကာ နှင့် အင်ဂျင်နီယာ များ ( Architects, Structural Engineers, Mechanical Engineers & Electrical Engineers )
ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင် များ။
Root Cause ကို စနစ်တကျ လေ့လာ ဆန်းစစ် ပြင်ဆင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး မီးလောင်ရတာ က ဝါယာရှော့ခ် ဖြစ်လို့ ဆိုတာ ကို ပဲ တာဝန်မဲ့ အပြစ် ထိုးချနေလို့ မရပါဘူး။
အားလုံး တာဝန် ကိုယ်စီ ရှိကြပြီး ဝိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုတစ်မျိုးမလိုတစ်မျိုး သားရေကွင်း လို မဟုတ်တဲ့ တိကျတဲ့ ပြဌာန်းချက်တွေ နဲ့ ရှိဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို အလွဲသုံးစား လုပ်တာ ကင်းတဲ့၊ လာဘ်သတ်ပကာ ကင်းတဲ့ ပညာရှင် ဆန်ဆန် နဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက် ဖြစ်တဲ့ မီးဘေးကာကွယ် ပေးနိုင် ဘို့ တစ်ခု ထဲ ကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့ သူတွေ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လိုတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (စင်္ကာပူ မှာ လို မီးသတ်လိုအပ်ချက် အတွက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ မနှောင့်နှေး တဲ့ အမြန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ စနစ် မျိုး လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပဲ အနှောင့်အယှက် ပေးကြတာ ဖြစ်တဲ့ မီးကြည့်ခြင်း နှင့် ဝင်လုခြင်း များ မဖြစ်ရအောင် ဥပဒေ အရ ကာကွယ် ပေးရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာ မှာ မီးသတ်ကား ဥသြဆွဲ လာရင် ကားတွေ အားလုံး လမ်းဘေးချ ရပ်ပေး ရပါတယ်။ အမေရိကန် လို လွတ်လပ်ခွင့် ရှိတဲ့ နိုင်ငံ မှာတောင် မီးလောင်တဲ့ အခါ မီးကြည့်သွားတာ က အပြစ်ရှိပါတယ်။ ဥပဒေ အရဖမ်းဆီး ဒါဏ်ရိုက် (သို့) ထောင်ချခွင့် ရှိပါတယ်။
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံ တွေ မှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ က အဆောက်အအုံ နေထိုင်ခွင့် ပါမစ် အတွက် အာဏာ အပြည့်ရှိသလို အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လျှင်လျှင်မြန်မြန် တုန့်ပြန်နိုင်ဘို့ အတွက် ပြဌာန်းချက်တွေ၊ မူတွေ ချမှတ်ပေးတဲ့ အကျိုးအမြတ် မကြည့်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေတဲ့ မီးဘေးကာကွယ်ရေး နည်းစနစ် တွေ ကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာ နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်နေဘို့ လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ခေတ်နဲ့ အညီ ခေတ်မီတဲ့ မီးသတ်စက်ပစ္စည်း တွေ ကို တတ်ဆင် ထားနိုင်ဘို့ လည်းလိုအပ် ပါတယ်။ (ဘတ်ဂျက် ကတော့ လိုမှာပါ။) မီးဘေးကာကွယ်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တွေ ဖြစ်လာဘို့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံရရှိ လာရင်တော့ နိုင်ငံ နဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် အားထားစရာ အင်အား တစ်ခုပါပဲ။
မဆောက်ခင်၊ ဆောက်နေဆဲ နဲ့ ဆောက်ပြီး သွားတဲ့ အချိန် အထိ လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်း၊ အချက်အလက် တွေ ကို လူတိုင်း သိနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပြီး အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ မီးသတ် ပညာရှင် တွေ (Fire Protection Professionals) လိုအပ်သလို သွားရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အဆောက်အအုံ အတွက် သင့်တော်တဲ့ မီးဘေး ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေ ပါမပါ၊ မှန်မမှန် စစ်ဆေး အတည်ပြု ပေးရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Drawings / Plans တွေ ကို စစ်ဆေးတာတင် မက Site Inspection အတွက် လည်း သင့်တော်တဲ့ Inspectors / Fire Safety Officers တွေ ကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ ထိထိရောက်ရောက် တုန့်ပြန်နိုင်ဘို့ သာမက မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အတွက်လည်း အန္တရာယ် နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် လည်း လိုအပ်တဲ့ Provisions တွေ ကို ပါ ပြဌာန်း ပေးထားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ သူတွေ မှာလည်း တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။
Site Planning & External Fire Fighting Provision :အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ မီးသတ်ကား တွေ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း ဝင်ထွက် နိုင်ဘို့ နဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေ အဆောက်အအုံ ထဲ ကို ဝင်နိုင်ဘို့ သင့်တော်မဲ့နေရာ လျာထားပေးရတာ၊ အပြင်ဘက်မှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အရံသင့် ရေထုတ် သုံးနိုင်ဘို့ Fire Hydrants တွေနဲ့ မီးသတ်အင်ဂျင် ကနေ အဆောက်အအုံ ထဲ ရေထိုးထည့်နိုင်ဘို့ Breeching Inlet တွေ ကို အင်ဂျင်နီယာ နဲ့ ညှိနှိုင်း နေရာချထားပေးရတာတွေ ပါ။
Means of Escape :အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လူတွေ လွတ်မြောက်နိုင်ဘို့ လိုအပ်တဲ့ Provisions တွေ ကို ထည့်သွင်းပေးတာ၊
Space Planning : Space Zoning, Fire Rated Partitions & Doors, Exits, Escape Routes, Stairs
Basic Fire Fighting Provisions :Fire Extinguisher, Fire Hosereels, Standpipe (Risers), Signs, etc.
Active Fire Fighting Strategies : Fire Fighting Systems, Detection, Smoke Venting, etc.
Coordination with MEP Engineers : Spaces Provisions for Active Fire Protection Systems, Water Tanks, Pump Rooms, etc.
Structural Fire Precautions :နေရာ အလိုက် သင့်တော်တဲ့ ရာသီဥတုဒါဏ် နဲ့ Load ဝန်အား ခံနိုင်ရည် တွေ အပြင် မီးဒါဏ် ခံနိုင်ရည် အားကို ပါ တွက်ချက် စဉ်းစားပေးရပါမယ်။
Load Bearing Structure Design :မီးသတ် စနစ်အတွက် Water Tanks ရေကန်တွေ နဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ထားတဲ့ Pump Rooms တွေ မှာ သင့်တော်တဲ့ Load ဒီဇိုင်းကို MEP Engineers တွေ နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တွက်ချက်ပေးရပါမယ်။ မီးသတ်ကား ဝင်မဲ့ နေရာ မှာ မီးသတ်ကား Load ဝန်အား ခံနိုင်ရည် ရှိမဲ့ လမ်းကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရပါမယ်။
Architects တွေ နဲ့ Structural Engineers တွေ က Passive Fire Protection လို့ ခေါ်တဲ့ မီးဒါဏ်ကာကွယ် နိုင်ဘို့ အဓိက စဉ်းစားရတဲ့ အချိန်မှာ Mechanical Engineers တွေ ကတော့ မီး ကိုငြှိမ်းသတ်ဘို့ Active Fire Protection ကို စဉ်းစားပေးရပါတယ်။
Fire Fighting Systems : သင့်တော်တဲ့ Fire Protecting Systems မီးသတ်စနစ်တွေ၊ ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရပါမယ်။ လိုအပ်မဲ့ စက်ပစ္စည်း အရွယ်ပမာဏ၊Electrical Demand၊ ပိုက်အရွယ်အစား က စပြီး လိုအပ်တဲ့ တွက်ချက်မှု တွေ ကို လည်း လုပ်ပေးရပါမယ်။
Mechanical Ventilation and Smoke Control Systems : အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ Air Conditioning Systems နဲ့ အခြား MEP Systems တွေကနေ မီးနဲ့ မီးခိုးတွေ မကူးနိုင်အောင် နဲ့ မီးခိုးတွေ ကို အချိန်မီ ဖယ်ထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ပေးရပါမယ်။
Electrical Safety Design ဒီလျှပ်စစ် လိုအပ်ချက် ကို အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ Professional Electrical Engineer က ဒီဇိုင်းလုပ်ရပါမယ်။ ဆိုင်ခန်းတွေ ရဲ့ မီးသုံးမဲ့ အား ( မီးထွန်းဘို့၊ ပါဝါသုံးဘို့၊ ) လိုအပ်ချက် အပြင် အဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံး အတွက် လိုအပ်ချက် တွေ ကို လည်း တွက်ချက်ပေးရတဲ့ သူပါ။ Overload (or) Short Circuit ဖြစ်ရင် သက်ဆိုင်ရာ Circuit ကို အလိုလို ဖြတ်ချဘို့။ Earth Fault / Leakage ဖြစ်ရင် အလိုလို ဖြတ်ချဘို့ တွေ လည်းပါဝင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီး ၊ ရေနဲ့ မတည့် ဘူးဆိုပေမဲ့ မီးသတ်စနစ် အများစု က Transformer Rooms တွေ နဲ့ Electrical Switch Rooms တွေက လွဲရင် ရေသုံးတာ များပါတယ်။ Earth Fault / Leakage ဖြစ်ရင် အလိုလို ဖြတ်ချမှာ မို့ ရေနဲ့သတ်လို့ မီးပိုကြီးစရာ အကြောင်း သိပ် မရှိလှပါဘူး။
Lighting Emergency / Exit Lighting အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လူတွေ ကို အလင်းရောင် ပေးနိုင်အောင် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ထွက်ပေါက် ကို ရှာတွေ့အောင် ထွန်းပေးရမဲ့ မီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ် မီးပြတ်သွားလည်း လင်းနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Back-up Battery Pack ဖြစ်ဖြစ်၊ Emergency Power Backup နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ထားပေးရပါတယ်။
Emergency Standby Power Generatorsအရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ မီးသတ်စနစ် တွေ အတွက် လိုအပ်မဲ့ ပါဝါ ကို လုံလုံလောက်လောက်ပေး နိုင်ဘို့ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ဂျင်နရေတာပါ။
Not Cutting Corners :ရေရှည် အကျိုးအမြတ် ကို ကြည့်ဘို့။ ပြီးစလွယ် မလုပ်ဘို့။ အပေါ်ယံ ဖုံးဖိပြီး လုပ်တာမျိုးရှောင်ဘို့။
Use Quality Material/Equipments :အရည်အသွေး ပြည့်မီတဲ့၊ သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းကို သုံးဘို့။ ပစ္စည်း မခိုဘို့။
Maintain Good Installation Quality :ဆောက်လုပ်တတ်ဆင် တဲ့ အခါ Installation Quality ထိန်းဘို့။ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ကို ပဲ အသုံးပြုဘို့။
စီးပွားရေး အုပ်စုတွေ က ပိုင်တာ ရှိသလို စည်ပင်သာယာ က ပိုင်တာလည်း ရှိပါမယ်။ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ကိုယ်စီ တော့ ရှိမှာ ပါပဲ။
Include Fire Protection Systems :သင့်တော်တဲ့ မီးသတ်စနစ် တွေ အတွက် ဘတ်ဂျက်ထည့်ပေးဘို့။ မလျော့ဘို့။
Tenants' Manuals :ဆိုင်ခန်းရှင် တွေ အတွက် Fit-out Manual / Agreements တွေ ထည့်သွင်းတဲ့ အခါ မီးဘေးကာကွယ် ရေး နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက် တွေ ပါဝင်ဘို့။ အထဲမှာ ထားနိုင်တဲ့ ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက် တွေ ပါဘို့။ ( ဥပမာ။ ။ Limiting Flammable Liquids / Combustible Materials.)
Fire Educations :ဆိုင်ခန်းရှင် တွေ၊ ဈေးသူဈေးသား တွေ ကို မီးဘေး ကာကွယ်ရေး အသိပေးဘို့။ ရံဖံရံခါ၊ Fire Drill ခေါ် မီးဘေးတိမ်းရှောင်မှု လေ့ကျင့်ခြင်း ကို လုပ်ပေးဘို့။ Fire Extinguisher သုံးတာ ကို Demonstration လုပ်ပြဘို့
Enforce Fire Protection Practices: Escape Route မှာ ပစ္စည်းထားတာ၊ ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း မထားတာ။ မသင့်တော်တဲ့ (Safety Mark မပါတဲ့) လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တွေ သုံးစွဲတာ တွေ ကို အရေးယူဘို့။ ဒါဏ်ရိုက်ဘို့ (မှတ်ချက်။ ။ ဒါဏ်ရိုက်ပါက မီးဘေးကာကွယ် ရေး ရံပုံငွေ အဖြစ် တရားဝင် စာရင်းသွင်း မှ သာ တရားမျှတ မည်ဖြစ်သည်။)
Maintenance of Fire Protection Systems : မီးသတ်စနစ် တွေ ကို အမြဲတမ်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေစေဘို့ အတွက်၊ အချိန်မှန် ထိန်းသိမ်းမဲ့ ဝန်ထမ်းရှိဘို့ နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှု ထိန်းသိမ်းမှု၊ စမ်းသပ်မှု တွေ ကို လုပ်ဘို့။
ဈေးအတွက် ရန်သူမျိုး ငါးပါး ဘေး ကနေ ကာကွယ်ဘို့ သင့်တော်တဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်တွေ စည်းတွေ ကို ဒီဇိုင်းလုပ်စဉ် ဆောက်လုပ်စဉ် ထဲက ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပြီး အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းဖြင့် သူခိုး၊သူဝှက် ရန်ကို သာမက တို့မီး ရှို့မီး အန္တရာယ် တွေကိုပါ အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Electrical Power Requirements : Electrical Engineer နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ဆိုင်ခန်းတွေ ရဲ့ မီးသုံးမဲ့ အား ( မီးထွန်းဘို့၊ ပါဝါသုံးဘို့၊ )။ မီးထွန်းဘို့ ဆိုရင်လည်း အလင်းရောင် အတွက်၊ အလှဆင်ဘို့ အတွက်၊ ပစ္စည်း တွေ ကို ဆွဲဆောင်မှု ပေးစေဘို့ အတွက် ဘယ်လောက်စီ သုံးမယ်။ ပါဝါသုံးဘို့ ဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက်အထိ သုံးဘို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာ အပြင် ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကို လည်း သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ ဆိုင်ခန်းရှင်တွေ ရဲ့ လိုအပ်ချက် ကို လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် စာရင်းကောက်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါက Electrical Safety အတွက်ပါ။
ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်များ ကတော့ ဆုံးရှုံးမှု ကို တိုက်ရိုက်ခံရမဲ့ သူတွေ ဖြစ်သလို စည်းကမ်းအဖောက်ဆုံး သူတွေ လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Follow Tenancy Manual for Safety မီးဘေးကာကွယ်ရေး အတွက် လိုက်နာရမဲ့ အချက်တွေ ကို လိုက်နာပါ။
Always clear escape routes : Escape Routes တွေကို ပိတ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ မထားသင့်ပါဘူး။ ဈေးတွေ ကို သွားကြည့်ရင် လမ်းတွေ ကို အထည်ထုတ်တွေ၊ စက္ကူ၊ ဂျပ်ထူဘူး တွေ နဲ့ ပိတ်နေတာ က အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ ဒုက္ခပေးပါလိမ့်မယ်။ ခနပါ၊ မဖြစ်လောက်ပါဘူး ဆို တဲ့ အတွေးမျိုး ဘယ်တော့မှ မရှိဘို့ သတိပြုရပါမယ်။
Store mercantile properly and do not store flammable liquids / materials:မီးလောင်နိုင်တဲ့ လောင်စာ တွေ ကို မသိုလှောင် ထားမိစေဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် Special Fire Compartment လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Use Only Safe Electrical Appliances :ယုံကြည်စိတ်ချ ရ တဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကိုပဲ သုံးဘို့ပါ။ အထူးသဖြင့် Motor ပါတဲ့ Electrical Appliances တွေဆို မီးအားအတက်အကျ ဒါဏ်မခံနိုင်တာ မို့ Regulator / Safe Cut-Off သုံးရပါမယ်။ Socket တွေ ကို မဆမတန် Overload မဖြစ်စေ ရပါဘူး။ ရေနွေးကျိုတဲ့ ဂေါက်၊ မီးဖို စတာတွေ က သုံးဘို့ မသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ရေနွေးဆူရင် သူ့ဖာသာ ပိတ်သွားမဲ့ Safety Kettle တွေလောက်တောင် မီးလောင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း မှာပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
Familiar with Fire Protection Education :အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ ဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲ သိရပါမယ်။ အခြေခံ မီးသတ်ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ယဉ်ပါးနေရပါမယ်။ မီးသတ်ဗူး (Portable Fire Extinguishers) တွေ၊ Fire Hosereel တွေ ကို သုံးတတ်ရပါမယ်။ Fire Hosereel တွေ က မီးလောင်တဲ့ အခါမှာ သုံးဘို့ဖြစ်ပြီး ရေဆေးတဲ့ အခါ သုံးဘို့ မဟုတ်ကြောင်း နားလည်ရပါမယ်။
မီးဘေးကာကွယ် ဘို့ အတွက် စဉ်းစားရမဲ့ အချက်တွေ ကတော့
မီးစမလောင် ရလေအောင် ဘယ်လို ကာကွယ် မှာလဲ ?
Fire Triangle က နိယာမ အရ အပူ (မီးပွင့်)၊ လောင်စာ နဲ့ လေ (အောက်ဆီဂျင်) သုံးခု ပေါင်းမှ မီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးပွင့်ဖြစ်မဲ့ အပူ ကို တားရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ Wire Shock, ဆေးလိပ်မီး၊ အမွှေးတိုင်၊ ဖယောင်းတိုင် မီး၊ မီးခွက်၊ မီးအိမ် တွေ က အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးထဲမှာ ဆေးလိပ် မသောက်ဘို့ တားရပါမယ်။ အမွှေးတိုင်၊ ဖယောင်းတိုင် ကို အကာအကွယ် လုံလုံလောက်လောက် မရှိပဲ ထွန်းတာ တားရပါမယ်။ သေသေချာချာ သတ်မှတ် ကာကွယ် ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် မီးဖို က လွဲရင် အပြင်မှာ ရေနွေးတင်ကျိုတဲ့ မီးဖို မထားရပါဘူး။ ( Safety Kettle တောင်မှ လောင်စာ နဲ့ လွတ်လွတ်ကင်းကင်း နေရာမှာ ပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။)
နောက်တစ်ခု က အပူဖြစ်မဲ့ နေရာနဲ့ လောင်စာ ကွာနေစေဘို့ပါ။ ဝါယာရှော့ခ် ဖြစ်ပေမဲ့ လျှပ်စစ် Circuit ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ထားရင် လျှပ်စစ်က သူ့ဖာသာပြတ်ကျ သွားပါမယ်။ ဆက်လောင်စရာ လောင်စာ အနားမှာကပ်ရက် မရှိရင် မီးမလောင်နိုင်ပါဘူး။
(အထည်၊ စက္ကူ၊ လို) မီးလောင်အား ကောင်းတဲ့ လောင်စာ တွေ ကို အဆမတန် မလှောင်ထားမိဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ မီးမကြီးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောင်စာဆီ တွေ ကတော့ ဈေးထဲ မှာ လုံးဝ မထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
မီးစ လောင်ခဲ့ရင်လည်း အရှိန်ကြီးမလာအောင်၊ အရှိန်မရခင် ငြှိမ်းသတ်နိုင်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲ ?
အဓိက က အချိန်မီ ငြှိမ်းသတ် နိုင်ဘို့ပါ။
"အချိန်မီသာသိရရင် ရေတစ်ခွက်၊ သဲတစ်ဆုပ် နဲ့တင် ငြိမ်းသတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။"
Portable Fire Extinguisher (မီးသတ်ဗူး) နဲ့ တောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အရှိန်မရမီ အချိန်မီ တားနိုင်ရင် ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါမယ်။
လက်လှမ်းမီ တဲ့ နေရာမှာ မီးအားပျော့ပျော့ ကို ငြိမ်းသတ်နိုင်တဲ့ Portable Fire Extinguishers / Fire Hosereels တွေ ရှိဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ကို ထိထိရောက်ရောက် သုံးတတ်တဲ့ သူ တွေ ဖြစ်ဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဈေးချိန်မဟုတ် လူမရှိတဲ့ အချိန်မှာ စတဲ့ မီးမျိုး ဆိုရင်တော့ မီးကင်းလှည့်တာ ထက် Active Heat / Smoke Detection Systems / Automatic Fire ProtectionSystems (Sprinkler, Gaseous Suppressions Systems, etc. ) တွေ က ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာတော့ Active Fire Systems တွေ လူမစ ရပဲ မီးအစပျိုးတာနဲ့ သူ့ဖာသာ အလိုလို လုပ်လုပ် မီးသတ်၊ တစ်ပြိုင်နက် တည်းမှာပဲ မီးသတ်ဌာန ကို လည်း အလိုလို ချိတ်ဆက် အသိပေးမဲ့ Systems တွေ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်နေရာ မှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ လည်း ကြိုသိတာ မို့ ချက်ချင်း ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
မဆောက်ခင် နဲ့ ဆောက်စဉ် ထဲ က အစီအစဉ် ချထားတာ မို့ မီးသတ်ကားဝင် ဘို့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တွေ အလုပ်လုပ်ဘို့ အနှောင့်အယှက် နည်းမှာ ဖြစ်ပြီး ပိုပြီး မြန်ဆန်စွာ ငြိမ်းသတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေရာ က နေတစ်နေရာ ကို မီးနဲ့ မီးခိုး မကူးရလေအောင် ဘယ်လို တားမလဲ ?
သင့်တော်တဲ့ Fire Rated Walls တွေ Fire Rated Doors ကို ထည့်သွင်းပေးတာ၊
Fire Rated Wall / Fire Compartments တွေ ကို ဖြတ်မဲ့ ACMV Ducts တွေ မှာ Fire Dampers တွေ တပ်တာ။ Non Combustible Pipe / Materials တွေ ကို သုံးတာ နဲ့ Fire Seal တွေ ထည့်တာ
အခြားအဆောက်အအုံ တွေ နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေး (Set-back) ထားပေးတာ၊ အပြင်က Structure ကိုလည်း သင့်တော်တဲ့ Rating ရအောင် ဒီဇိုင်းလုပ်တာ တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လူတွေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်အောင် ဘယ်လို စီစဉ်မလဲ ?
အထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေ ကို အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးမဲ့ စနစ် နဲ့ အတူ သင့်တော်တဲ့ Means of Escape ရှိဘို့ပါ။ လမ်းကြောင်း ရှင်းရမယ်။ လုံလောက်ကျယ်ဝန်း ရမယ်။ မီးကြောင့် ပြိုကျ နိုင်တဲ့ နံရံတွေ၊ Ceiling တွေ နဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေ မရှိရဘူး။ လုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင် ရဘို့ အညွှန်း Lighting (Exit / Emergency Lights) ရှိရမယ်။ မီးခိုး နဲ့ မီး ဘေး က နေ ကာကွယ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်း တွေ ဖြစ်နေဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
အခြေခံ မီးဘေးကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ အဆင့်ဆင့်။
မီးဘေးကာကွယ်ရေး အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ Infrastructure တွေ ကတော့။
Water : မီးဘေးအတွက် ပါ သုံးနိုင်အောင် ပေးဝေနိုင်မဲ့ ရေပေးဝေရေး စနစ်
Electricity : အားထားနိုင်သော တည်ငြိမ်သည့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စနစ် (Reliable and Stable Electricity Supply)
Telecommunication : မီးသတ်ဌာန ကို အချိန်မရွေး ချက်ချင်း ဆက်သွယ် နိုင်မည့် (Reliable Telecom Network)
Road, Access: မီးသတ်အင်ဂျင် များ အခက်အခဲ မရှိ လာနိုင်မည့် လမ်းပန်း အဆက်အသွယ်။)
Fire Departments with Fire Engines: မီးသတ်အင်ဂျင် များ ရှိသော မီးသတ် ဌာန သင့်တော်ရာ (မဝေးလွန်း တဲ့ နေရာ) မှာ ရှိနေဘို့။
Fire Hydrants (Public/Private): မီးသတ်အင်ဂျင် တွေ အဆင်သင့် သုံးနိုင်ရန် မီးသတ်ဘုံဘိုင်ခေါင်း များ သင့်တော်ရာ (မဝေးလွန်း တဲ့ နေရာ) မှာ ရှိနေဘို့။
မြန်မာပြည် မှာ တော့ ဒီ Infrastructure တွေ က ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းလောက်အောင် ခေတ်နောက်ပြန် နေပါပြီ။ ပြည်သူလူထု နေထိုင်ရေး၊ စီးပွားရေး ပြေလည်ဘို့ အတွက် Infrastructure တွေ ကလည်း အဓိက ကျပါတယ်။
မီးအားမှန်တဲ့ နေရာမှာ ၁၅ နှစ် - အနှစ် ၂၀ လောက် ဘာမှ ပြင်စရာမလို ပဲ သုံးလို့ ရမဲ့ ရေခဲသေတ္တာ တစ်လုံး ကို မီးအတက် အကျ နဲ့ မှန်မှန် မလာတဲ့ နေရာ မှာ ထားရင် ရက်ပိုင်းအတွင်း မိုတာ လောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ( မီးအားမှန် = Stable Supply + Stable Frequency + Stable Voltage )။ Air-Cond, TV တွေ လည်း ထို့ အတူပါပဲ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တော်တော်များများ က မီးမမှန်တဲ့ ဒါဏ် ကို ကြာကြာ မခံနိုင်ပါဘူး။ မီးအားမမှန် တဲ့ အခါ Inverter, Voltage Regulator, Safe-Guard စတဲ့ အပိုပစ္စည်းတွေ ထည့်ရတာ မို့ Energy Consumption လည်း ပိုလာပါတယ်။ မီးစောင့်ပြီး ညဉ့်နက်သန်းကောင် ရေတင်ရတာ၊ ထမင်းအိုးတောင် ဖြောင့်ဖြောင့် ချက်ခွင့် မရတာ၊ ရေခဲသေတ္တာ ဆိုလည်း ကြောင်အိမ်သာသာ ဖြစ်နေတာ တွေ ကတော့ ……မီးလာတဲ့ အချိန် ကိုစောင့် အခွင့်အရေး ရသမျှလေး နဲ့ ဝိုင်း သုံးချင်ကြတာမို့ ပါဝါဆွဲအား ကလည်း ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မတန်မဆ တွေ ဖြစ်ကုန်ရပြန်ပါတယ်။
အပြင်က ယုံကြည်အားထား လောက်ပြီး အဆင်သင့် ယူလို့ ရတဲ့ Reliable Infrastructure မရှိတဲ့ အခါ ဒီအတွက် ပိုပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ရပါတော့မယ်။ ရေကန် အရွယ်အစား လိုအပ်ချက် ကြီးလာတာ၊ ဂျင်နရေတာ ပိုသုံးရတာ မျိုးတွေပါ။
အခြား မီးဘေးကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက် တွေ ကို အသေးစိတ် မှီငြမ်း လေ့လာဘို့ သင့်တော်တာ ကတော့ Singapore Civil Defense ရဲ့ Publishing Website ပါ။ Free Download လည်း ရပါတယ်။ ဈေး Shops အတွက် က Purpose Group V ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ ရဲ့ Introduction to Fire Protection Systems မှာလည်း ဒီ အခြေခံ တွေ ကို တင်ပြထားပါတယ်။
Means of Escape လူတွေ ဘေးမသီ ရန်မခ လွတ်မြောက် စေဘို့ လိုအပ်ချက် တွေ ဖြည့်ဆီးပေးရပါမယ်။
Structural Fire Precautions မပြိုလဲ မပျက်စီး နိုင်မဲ့၊ တစ်နေရာ ကနေ တစ်နေရာ မီးမကူးနိုင်တဲ့ Wall, Columns, Slab, Roof, etc. တွေ ပါဝင်ရပါမယ်။
Site Planning & External Fire Fighting Provision မီးသတ်ကား အဝင်အထွက် လွယ်မဲ့ လမ်းရှိရမယ်။ ပတ်ပတ်လည် မီးသတ်ကား ဝင်နိုင်ရမယ်။ (ကွေ့လို့ ရမဲ့ Turning Radius ရှိတဲ့ ထောင့်ချိုး ကွေ့ဖြစ်ရမယ်။ လမ်းမှာ ဘာမှပိတ်မနေ ရဘူး။ အပြင်ဘက် လမ်းဘေး မှာ မီးသတ်ကား အဆင်သင့် ယူ သုံးနိုင်မဲ့ Fire Hydrants တွေ ရှိရမယ်။ မီးသတ်ကားက နေ ပေးနိုင်ဘို့ Breeching Inlets တွေ ရှိရမယ်။
Electrical Power Supplies အရေးပေါ် မီးသတ်စနစ် အားလုံး အတွက် လုံလုံလောက်လောက် ပေးနိုင်တဲ့ (အရေးပေါ် မှာ အလုပ်သေချာပေါက် လုပ်မဲ့) လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးစနစ် ဂျင်နရေတာ လိုအပ်ပါမယ်။
အခြားတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံ တွေ မှာ တော့ မီးသတ်စနစ် အားလုံးလိုလို က မပါမဖြစ်ပါ။ မပါရင် ဈေး ဖွင့်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည် အနေနဲ့ က တော့ အစ မို့ လိုအပ်ချက် တွေ ကို ကုန်ကျ စရိတ် နဲ့ ယှဉ်ရပါလိမ့်အုံးမယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်ချက်တွေ ကို ဦးစားပေး အစီအစဉ် နဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရေသုံးတဲ့ မီးသတ်စနစ် တွေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ ရေကန် (Water Tanks) တွေ နဲ့ ရေတင်စက်၊ ရေပန့် (Pumps) တွေ လိုအပ် ပါမယ်။ Hosereel အတွက် ဂါလန် (Imperial) 2,000 - 3,000 လောက် ဆန့်တဲ့ ကန်အသေး (မှတ်ချက် မှီငြမ်း မလေးရှား လိုအပ်ချက်။ စင်္ကာပူ လိုအပ်ထက် များစွာ ကြီးသည်၊ အဝင် ရေအား ကို အားမကိုးရ သဖြင့်။) ပန့် အသေးပဲ လိုအပ်ပေမဲ့ Standpipe တွေ နဲ့ Sprinkler Systems တွေ အတွက်တော့ ဂါလံ လေး-ငါးသောင်း လောက် အထိ ဆန့်တဲ့ Tanks အကြီးစား နဲ့ Pumps အကြီးစားတွေ လိုအပ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါကို မီးသတ်ဒီဇိုင်း အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Experienced Mechanical Engineer တွေ က ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခြေခံ မီးသတ်စနစ် များ။
ဈေးထဲမှာ လူတွေရှိနေတယ်။ (သို့) နိုးနိုးကြားကြား မီးကင်း လှည့်စောင့်နေတဲ့ သူ ရှိမယ် ဆိုရင် အောက်က စနစ် တွေ က မီးမကြီး လာအောင် အထောက်အကူ ပြု မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Portable Fire Extinguishers အသင့်သုံး မီးသတ်ဘူးများ ကို နေရာ အကျယ်အဝန်း နဲ့ အကွာအဝေး ပေါ် မူတည်ပြီး ထားခြင်း။ တွက်နည်း ကို အရင် Post တွင် ကြည့်ပါ။ (ဈေးသူ၊ ဈေးသားများ အရေးပေါ် သုံးရန် )
Fire Hosereels : အဆောက်အအုံ တွင်းသုံး မီးသတ် ရေပိုက်ခေါင်းငယ် များ ကို နေရာ အကျယ်အဝန်း နဲ့ အကွာအဝေး ပေါ် မူတည်ပြီး ထားခြင်း။ (ဈေးသူ၊ ဈေးသားများ အရေးပေါ် သုံးရန် )
Fire Alarm System မီးလှန့် အချက်ပေး စနစ်။ မီးလှန့် သံချောင်း စနစ်၊ အရေးပေါ် အခြေအနေ တွင် ခလုတ် နှိပ်ပြီး အသိပေး နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။ (ဈေးသူ၊ ဈေးသားများ အရေးပေါ် သုံးရန် )
Stand pipe (Wet/Dry Risers) အထပ်အလိုက် ထားသော မီးသတ် ရေဘုံဘိုင် ခေါင်း များ ( မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် မီးသတ်သမား များ သုံးရန်။)
Fire Hydrants ခြံဝင်းအတွင်း နှင့် လမ်းဘေး တစ်လျှောက် တွေ့ရလေ့ ရှိသော အဆောက်အအုံ ပြင်ပသုံး မီးသတ် ရေဘုံဘိုင် ခေါင်းများ၊ ( မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် မီးသတ်သမား များ သုံးရန်။)
Public Address Systems : ဈေးသူ ဈေးသား တွေ စိတ်ချမ်းသာ ဘို့ နဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ ဈေးဝယ်သူ တွေ ပါ စနစ်တကျ Evacuate လုပ်နိုင်စေဘို့ ညွှန်ကြားပေးနိုင်ဘို့ အတွက်၊ Public Address Systems လည်း တတ်သင့်ပါတယ်။ အရေးပေါ် မဟုတ်တဲ့ အချိန် မှာ လည်း ချိုသာ တေးသံ တွေ နဲ့ ဈေးဝယ်သူ ကို စိတ်ချမ်းမြေ့ စေနိုင်ပါသေးတယ်။
အလိုအလျောက် မီးလှန့် အချက်ပေး စနစ် များ။
Fire and Smoke Detectionမီး၊ အပူ နဲ့ မီးခိုး တို့ကို အာရုံခံ ပြီး အလိုလို အချက်ပေးစနစ်၊ ဒါက မီးကို တိုက်ရိုက် မငြိမ်းသတ်ပေးပေ မဲ့ မီးအချိန်မီ ငြိမ်းသတ်ခွင့် ရအောင် မီးလှန့် အချက်ပေး ပါလိမ့်မယ်။
Fire Department Call Panel လို့ ခေါ်တဲ့ Dedicated telephone နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ စနစ် ရှီရင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ကို အလိုလို အကြောင်းကြားနိုင်ပါသေးတယ်။
အလိုအလျောက် မီးသတ်စနစ် များ။
Automatic Sprinklers အလိုအလျှောက် ရေဖြန်း မီးသတ် တဲ့ စနစ် ရှိရင်တော့ မီးတော်တော် များများ က စိတ်အေးရပါတယ်။ သူ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ကို လည်း တတ်နိုင်မယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။ ဒီစနစ် က အဆောက်အအုံ အသေးတွေ အတွက် တွက်ချေ မကိုက်ပေမဲ့ မမင်္ဂလာဈေး လို လက္ကား ဈေးကြီး မျိုး အတွက် ကတော့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဈေးသူဈေးသား တွေ အတွက်လည်း တကယ့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Gas Fire Suppression Systems မီးသတ် ဓာတ်ငွေ့သုံးစနစ် များ၊ Pyrogen, CO2, Inergen, etc. စသည်၊) တွေ ကို Indoor Transformer Rooms တွေ၊ Main Switch Room တွေ အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပိုင်ရှင်အတွက် အဓိကပါ။
မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ အတွက် အထူး စနစ် များ။ ဒါတွေ က လည်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အဆင့်မြင့်လာ တဲ့ အခါ သူတို့ အသင့်သုံး ဘို့ သတ်မှတ် ပေးလေ့ရှိတဲ့ စနစ်တွေ ပါ။
Fire Lift အရေးပေါ် အခြေအနေ တွင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ သုံးရန် ဓာတ်လှေကား
Fire Brigade communication Systems မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း ဆက်သွယ် နိုင်ဘို့ အတွက် ဆက်သွယ်ရေး စနစ်
အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ မီးခိုးမွန်းပြီး အသက်မဆုံးရှုံးရစေဘို့ အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံ ရဲ့ ဒီဇိုင်း ကိုလိုက်ပြီး Smoke Extraction Fan / Smoke Exhaust Duct လိုတာ ဖြစ်နိုင်သလို အမိုးကို ဖွင့်ထုတ်ပေးတဲ့ စနစ် စသည် ဖြင့် အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Root Causes တွေ ကို ရှာတဲ့ အခါ အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ခုခု ကိုတော့ တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ ကင်ဆာတဲ့ ဆိုးတဲ့ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ Root Causes ကြီး တွေ ကတော့ တော်တော်နဲ့ ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Fire Protection Systems (Passive & Active) : မီးဒါဏ်ခံ နိုင်တဲ့ အဆောက်အဦ ဖြစ်ဘို့ နဲ့ မီးဘေးကာကွယ် ရေးစနစ် တွေ ပါဝင်ဘို့။ အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ လည်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေဘို့ နဲ့ သုံးစွဲခွင့် ရနိုင်ဘို့ အရေးကြီးတာ ကို လည်း သတိပြုကြရပါမယ်။ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တွေ ထိထိရောက်ရောက် မီးသတ်နိုင်ခွင့် ရအောင် လည်း စဉ်းစားပေးရပါမယ်
ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် နဲ့ ကြက်ဥ၊ ကြက်မ လက်ညှိုးထိုးမဲ့ အစား ကြက်ဥ က ပဲ စစ ကြက်မ ကပဲ စစ တစ်ခုခု က နေ စပြီး တစ်ဆင့်ချင်း ဖြေရှင်း ယူရပါလိမ့်မယ်။ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားအောင် လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အမြင်ကျယ်အောင် လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အတွေ့အကြုံတွေ ရအောင် လုပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။
လျှပ်စစ်မီး ကြောင့် မီးမလောင်ရအောင် ဆိုရင်လည်း မီးအားမှန်မှန် နဲ့ မီးမှန်မှန်လာဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မီးအားမမှန် တာ က ဝါယာရှော့ခ် ဖြစ်ဘို့ အခွင့်အရေး ပိုများပါတယ်။
Electrical Distribution Design ကို Experienced Electrical Engineer က ဒီဇိုင်းလုပ်တာ ဖြစ်ရပါမယ်။ သင့်တော်တဲ့ ဝါယာကြိုး အရွယ်အစား။ Circuit Breakers , Switches, Distribution Panels, Main Switch Boards, Transformers, Earthing တွေ က စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတာ ဖြစ်ရပါမယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချ ရတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တွေ သုံးနိုင်အောင် စစ်ဆေးတဲ့ Singapore Safety Mark လို CE လို (အဂတိ ကင်းတဲ့) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ Tester နဲ့ထောက်ကြည့်ရင် မီးလင်းတဲ့ တရုတ်ပြည် ဖြစ် အပေါစား လျှပ်စစ် ပစ္စည်း တွေ ကို ပဲ သုံးနိုင်အောင် ဆင်းရဲမွဲတေနေအောင် လုပ်တဲ့ ဒါဏ်တွေ အချိန်အကြာကြီး ဆက် ခံနေကြရရင်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ (မှတ်ချက်၊ တရုတ်ပြည် မှ အရည်အသွေး ကောင်းမွန် သော ပစ္စည်း များ ကို လည်း ကမ္ဘာ အနှံ့ ပို့နေပါသည်။ မြန်မာပြည် အတွက် က တော့.)
လူတွေ ကို လည်း စိတ်ချရတဲ့ လျှပ်စစ် ပစ္စည်း သုံးနိုင်ဘို့ ပညာပေးရပါမယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီး Hair Dryer သုံးရင်း ဓါတ်လိုက် ဆုံးရှုံးသွားတယ် ဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်း သမီး တွေအကြောင်း ကြားဘူးကြ မလားပဲ။ ဒီနေရာ မှာ ကံကို ပုံချ လို့ တော့ မသင့်တော်ဘူး ထင်ပါတယ်။
Previous Blog Posts ( စာရေးသူ )
[ http://chawlwin.blogspot.com/2008/10/fire01introduction.html ]
[ http://chawlwin.blogspot.com/2009/12/smoke-control-part-1-pressurization.html ]
[ http://chawlwin.blogspot.com/2010/03/understanding-automatic-fire-sprinkler.html ]
[ http://www.scdf.gov.sg/Building_Professionals/Publications/fire_code_2007master_version.html ]
[ http://www.scdf.gov.sg/Building_Professionals/Publications/fire_code_2002handbooks.html ]
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 12:28 PM Labels: Fire Protection, Myanmar